Qorshe cusub ee la xiriira ka hortagga nacaybka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qorshe cusub ee la xiriira ka hortagga nacaybka
La cusbooneeyay onsdag 23 november 2016 kl 17.09
La daabacay onsdag 23 november 2016 kl 16.25
sawir: Fredrik Sandberg/TT
Dawladda ayaa maanta soo saartay qorshe cusub oo looga hortageyo ka hor-tagga naceeybka iyo faqooqa.
Qaasatan kolka laga hadleyo nacaybka iyo faqooqa la isugu geeysto aaladda internet-ka.
- Faqooqu waa xaalad aad u adag kolka la dooneyo in la dhiso bulsho mideey-san. Waa in si joogto oo mideeysan aannu uga hor-tagno faqooqa, sida ay sheegtay wasiiradda dhaqanka iyo dimoqoraadiyadda Alice Bah Kuhnke (MP) oo shir jaraa’id maanta qabatay.
Qorshaha ay dawladdu soo ban-dhigtay ee ka hor-tagga nacaybka iyo faqooqa ayaa lagu tilmaamey istaraatiijiyad ka kooban shan qaybood: Aqoon kororsi dheeraad ah, tacliin iyo cilmi-baaris, howlaha oo la mideeyo iyo raad-raac, kor u kac taageerada ururrada rayidka, dardar-gelin ka hor-tagga nacaybka ee aaladda internet-ka iyo sidoo kale in la xoojiyo ka qayb ahaanshaha hayadaha cadaaladda.
Wasiirka arrimmaha gudaha Sweden Anders Ygeman (S) ayaa sheegay in tooshka lagu ifin doono shaashadaha internet-ka oo ey ku badan yihiin ama caadiyanba lagu qoro fikirrada ama faalooyinka faqooqa.
- Waxaannu dooneynaa in aannu wada xaajood la yeelano dadyowga mulkida u leh ama gacanta ku haya shaashadahaa annaga oo weliba dooneyna in aannu ka saarno cidda jebineeysa xeerarka, sida uu wasiirku sheegay. Isaga oo hadalkiisii sii watana wuxuu yiri:
- Qorshe aannu soo ban-dhigney ayaa ah in xittaa dadyoowga transperson-ka ah (dadyoowga sinjiga bedesha) lagu daro xeerka nacaybka kooxaha. Waxaa sidoo kale muhiim ah in si guud loola dagaalamo nacaybka iyo faqooqa, middaasina oo aan horay loogu tallaab-san, sida uu sheegay Anders Ygeman.